Qeybta:Saxaafadda Clip4 min akhris
Madaxa Foundation McKnight Tonya Allen ku biiray MPR News waxay martigelineysaa Angela Davis si ay uga hadasho doorka samafalka waqtiyada qasan. Waa kuwan lixda fikradood ee waaweyn ee ay wadaagtay:
1. Ma jiro waqti ka fiican oo aad joogto Minnesota
"Uma maleynayo inay jirto waqti ka wanaagsan oo aan ku joogno Minnesota… waa fursad aan kula kulmo daqiiqadda."
Ka dib dilkii George Floyd iyo kacdoonnadii caddaaladda isirka ee adduunka ee xigay, waxaan haysannaa fursad aan hore loo arag oo aan si fudud dib loogu dhisin - laakiin inaan dib ugu dhisno si caddaalad ah oo waarta, oo wax ka beddeleysa siyaasadihii iyo dhaqammadii sii waday caddaalad darrada.
Minnesota waxay diyaar u tahay inay kasbato booskeeda udub -dhexaadka dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee sinnaanta jinsiyadaha. McKnight, waxaan qorsheyneynaa inaan ku maamuusno dhaxalkii George Floyd annaga oo fulinayna ballanqaadyadii wadajirka ahaa si aan u dhisno mustaqbal caadil ah, loo siman yahay, oo adkaysi leh.
2. Isbeddelka cimiladu wuxuu ka badan yahay caqabad farsamo - sidoo kale waa arrin ku saabsan caddaaladda isirka.
"Mar kasta oo fowdo ay ka dhacdo nidaamkeenna, waxaad rumeysan kartaa in kuwa ugu liita ay noqon doonaan kuwa ugu dhibka badan."
Dhibaatada cimilada iyo caddaaladda isirka ayaa ka mid ah caqabadaha ugu degdegsan ee bulshadeenna, waana in dhinac-dhinac wax looga qabto. Tonya waxay xoogga saareysaa sida isbeddelka cimiladu uu nidaamyadeenna cimilada ugu dhex tuuray fowdo - u abuuray duufaanno aan la saadaalin karin iyo fatahaad, cunno -yari, diiwaangelin hargab iyo hirar kuleyl ah oo nagu dhacay dhammaanteenna inta badan bulshooyinka midabka ugu daran.
3. Waxaan u baahanahay hagaajiyayaal iyo dhisayaal
"Philanthropy wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa isku dayga lagu ogaanayo sida loo maalgashado oo si istiraatiiji ah isu dheellitiro sida aan u taageerno hagaajiyayaasha iyo sida aan u taageerno kuwa wax dhisa maxaa yeelay waxaan u baahanahay labadaba bulshadeena."
Maanta, wax caqabado ah kama hor imaanno - laga bilaabo masiibada socota iyo qalalaasaha dhaqaale ilaa isbeddelka cimilada iyo xisaabinta isirka ee qarankeenna. Tonya waxay ka hadlaysaa sida ay u jiraan laba waji - kuwa arka dhibaatooyin oo raba inay isla markiiba hagaajiyaan waxay arkaan, kuwa arka dhibaatooyin waxay doortaan inay ka fekeraan mustaqbal wanaagsan. Mararka qaarkood, kuwa qaata labadan hab ayaa is khilaafsan oo laga yaabaa inay xitaa isku dhacaan, laakiin dhab ahaantii labaduba waa sax. Waxaan u baahanahay hagaajiyayaal iyo kuwa wax dhisa. Philanthropy waxay naga caawin kartaa inaan ka gudubno aragtiyadan kala duwan, waxay naga caawinaysaa inaan u dhaqaaqno xalka wanaagsan.
4. Waxaan u baahanahay madax kala duwan
“Waxaan goob walba ka raadineynaa hoggaamiyeyaal kala duwan oo ka fikiraya sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinkaas. Waxaan sidoo kale raadineynaa dadka doonaya inay si wadajir ah u shaqeeyaan. ”
Si aan ula kulanno waqtigan taariikhiga ah, waxaan u baahanahay hoggaamiyeyaal kala duwan oo ka socda dhammaan qaybaha raadinaya xalka iyo wada shaqaynta. Tonya waxay iftiiminaysaa sida uusan hal urur ama shaqsi kaligiis u xalin karin caqabadaha maanta jira. Waxay naga qaadan doontaa dhammaanteen - farshaxan -yahannada, dhaqan -yaqaannada, milkiilayaasha meheradda, hal -abuurayaasha tamarta nadiifka ah, beeraleyda, iyo u -doodayaasha bulshada - wada shaqeynta iyo horumarinta xallinta geesinimada leh, mala awaalka ah.
5. Awoodda wax-beddelidda samafalka ku salaysan meesha
"Waxaan sameeyaa shaqadayda ugu fiican markaan ku dhex jiro bulshada… dhex -galku micnaheedu maahan kaliya inaan ogaado meesha, laakiin waxaan jeclahay meesha."
Tan iyo markii la aasaasay, McKnight wuxuu ku faanay inuu yahay aasaas meel ku saleysan. Waxaan aaminsanahay marka reer Minnesota ay isugu yimaadaan ujeedo la wadaago, waxaan kobcin karnaa isbadal waara oo isbadal leh kaas oo abuuraya cadaalad badan, hal abuur leh iyo mustaqbal badan oo ay dadka iyo meeraha ku horumaraan.
Iyada oo reer Minnesota cusub ah, Tonya waxay la wadaagaysaa sida ay ugu dhex milmay bulshada dhexdeeda iyo sida ay wax uga baratay hoggaamiyeyaasha gobolkeenna oo dhan - oo ay ku jiraan lixda gobol Aasaasiyadeedka Minnesota, kaas oo diiradda saaraya xoojinta bulshooyinka iyo dhaqaalaha Greater Minnesota.
6. Helitaanku wuxuu fure u yahay dhisidda bulsho sinnaan iyo caddaalad leh
“Waan naqaan sida loo abuuro sinnaan. Waan naqaan sida loo abuuro ka mid noqoshada. Bulshada naafada ah ayaa na tustay sida loo sameeyo. ”
Tonya ayaa ka jawaabaysa faallooyinka qofka soo wacaya oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay in dadka naafada ah lagu daro wadahadallada ku saabsan kala duwanaanshaha, sinnaanta, iyo ka mid noqoshada. Waxay ka hadlaysaa sida aan dhammaanteen uga wada faa'iidnay bulshada naafada ah oo riixaya in la-gooyo waddooyinka dhinaceeda. Waad ku mahadsan tahay u -doodiddooda guuleysatay, dhammaanteen waan ka faa'iideysannay - waalidiinta ku riixaya baabuur -wadista inay gaarsiiyaan dadka, orodyahannada, iyo in ka badan. Waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan “Saamaynta La-gooyay” halkan iyo sida qof walba u anfacayo markaan naqshadeynayno si aan uga faa'iideysanno kooxaha nugul.
Kuwa aan macaash doonka ahayn ee raadinaya ilo dhaqaale, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad eegto Bogga “Loogu Talagalay Deeqaha” oo aad barato barnaamijyadayada kala duwan iyo xeeladaha gaarka ah iyo shuruudaha deeq -bixinta.